Maxay Boko Xaram weli khatar u tahay? - BBC Somali
Maxay Boko Xaram weli khatar u tahay?
7 Maajo 2015
Haddii muuqaalka uu dhawaan shaaciyay milateriga Nigeria uu yahay mid la qaadan karo, haddaba dadka reer Nigeria waxa ay mudan yihiin inay rajo ka muujiyaan dagaalka ay dowladda kula jirto kooxda Islaamiga ah ee Boko Xaraam.
Milateriga Nigeria ayaa sheegay in muuqaalku uu muujinayo dagaalyahanada Boko Xaraam oo saaran gawaari iyo dhugdhugley oo ka baxsanaya duqeymaha ciidammada cirka, howlgal ay dhawaantan ka fuliyeen keynta Sambisa, taasi oo loo malaynayo inay tahay meeshii ugu dambeysay ee ay xoogga ku lahaayeen gudaha Nigeria.
Todobaadkii la soo dhaafay oo kaliya, milaterigu waxa uu sheegay in boqolaal haween iyo carruur ah lagu soo badbaadiyay qeyb ahaan weerrarada socda ee ka dhan ah kooxda.
Horumarkan ugu dambeeyay ayaa waxa ay ka dhigan tahay in milateriga Nigeria uusan qabsan oo kaliya magaalooyin ku yaal waqooyi bari oo ay horay u haysatay kooxda Boko Xaraam, hasayeeshee ay haatan ka tirtirayaan meelihii ugu dambeeyay ee ay ku dhuumaalaysan jireen.
Milateriga ayaa bilaabay inay soo saaraan muuqaallo caddeyn u ah oo taageeraya guusha ay gaareen, sidoo kalana waxa ay muujiyeen sida uu u doonayo in dagaalka uu u adeegsado dacaayad.
Inta aanu milaterigu howshan sameyn ka hor, ayaa dad badan waxa cabsi iyo rajo la’aan ku abuuray sawirrada kooxda Boko Xaraam oo ay ku jiraan iyagoo qaadaya weerraro arxan darra ah iyo hogaamiyahooda Abuu Bakar Shekau oo ku jees jeesaya dowladda.
Codkii ugu dabmeeyay ee uu Shekau baahiyay ayaa ahaa midkii uu bishii Maarso ku ballan qaaday inuu daacad u yahay kooxda Dowladda Islaamiga ah.
Hasayeeshee sida horay looga arkay kooxdaasi, aamusnaanta ay haatan muujiyeen kama dhigna in la wiiqay awoodoodii.
Weerraro loo tiriyay inay gaystaan Boko Xaraam ayaa weli waxa ay ka socdaan Nigeria iyo wadammada dariska la ah.
Hogaamiyayaasha ciidammada qalabka sida ayaa sheegay in inta badan aanay helin meydadka kooxda ee ku dhinta dagaalada, taasina waxa ay muujinaysaa in kooxdan jihaadiga ah ay qaataan meydadkooda markii ay dib u guranayaan.
Ma ay cadda in sarkaal sare oo Boko Xaraam ka tirsan lagu qabtay howlgalladii dhawaantan, sidaasi waxaa sheegay Ryan Cummings, oo ah madaxa khubarada ka faaloota Afrika ee shirkadda maareynta khatarta ee Red24.
"Xilli hoggaanka kooxda uu weli dhameystiran yahay, waxaa suuragal ah in Boko Haram ay sii wado in ay isa soo habeyso oo gudaha Nigeria iyo xuduudaheedaba ku faafaan."
Sidoo kale waxaa jirta dood ah in inta aanan wax laga qaban arrimaha ay ka midka yihiin saboolnimada, shaqo iyo waxbarasho la’aanta, in dadka maxaliga ah ay weli u sahlanaan doonto inay si fudud u qaataan fikradaha xagjirnimada.
Markii laga soo tago keynta Sambisa, oo ah deegaan ballaaran oo ah keyn iska dabiici ah oo ku wareegsan goobtaasi, ayaa sidoo kale kooxda lagu yaqaannaa in ay ka howlgasho Buuraleyda Mandara, oo ku taalla xudduuda dayacan ee u dhaxaysa Cameroon iyo Nigeria.
In halkaa kooxda lagula dagaalamana waxa ay u baahan tahay in ay si weyn u wada shaqeeyaan labada dalba – taasina waa midda la la’yahay – si ay ula dagaalamaan cadowgooda.
Madaxweynaha la doortay ee Nigeria Muxammadu Buhari, oo ah hoggaamiye horay uga tirsanaan jiray milateriga, ayaa sheegay in mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya ee uu qaadi doono markii uu xafiiska la wareego ay tahay in uu shir isugu yeero hogaamiyayaasha heer gobol si ay ula yimaadaan iskaashi firfircoon si loo soo afjaro colaadda.
Xogta Boko Xaraam oo kooban
Waxaa la aasaasay 2002, waxa ayna markaa diiradda saari jireen sida ay uga soo horjeedaan qaabka waxbarasahada ee Reer Galbeedka – Afka Hausa-ha Boko Xaraam waxaa lagu macneeyaa "Waxbarashada reer Galbeedku waa xaaraan"
Waxa ay 2009-kii bilaabeen howlgallo milateri si ay u sameeyaan dowlad Islaami ah
Kumanaan qof ayaa la dilay, oo intooda badan waxaa lagu dilay waqooyi bari Nigeria – sidoo kale waxa ay kooxdu weerartay xarumaha booliska iyo xarumaha Qaramada Midoobay ee caasimadda Abuja
Boqolaal qof ayey afduubteen, oo ay ku jiraan ugu yaraan 200 oo gabdho iskuuley ah
Waxa ay qabsadeen deegaano badan oo ka tirsan waqooyi bari, halkaasi oo ay khaliifad kaga dhawaaqeen
Ciidammo ka socday gobolka ayaa dib u qabtay inta badan dhulkii ay ka talinaysay kooxda
Gen. Buhari wuxuu sheegayaa in xukuumadda xilka ka degaysa wax badan ka qaban sidii si haboon looga bixin lahaa jawaab heer gobol ah.
Xiriirka xuduudaha dhaafsiisan ee aan adkayn ayaa saamayn ku yeeshay hawlgalladii milateri, ayadoo caro iyo kalsooni darro ay dhex taallo Nigeria iyo jaarkeeda.
Muddo dheer ayaa dagaalyahannada Boko Xaraam waxay awood u lahaayeen in ikhtiyaarkood ay soohdinta kaga gudbaan, oo ay qaadaan weerarro, ayna ka baxsadaan wixii jawaab ah ee laga bixiyo, laakin iminka waxaa dhaqdhaqaaqooda xaddiday ciidamo isku dhaf ah oo gobolka ka socda.
Waddanka Nigeria, waxaa la filayaa in Gen. Buhari uu isku shaandheyn ku sameeyo saraakiisha ugu sarraysa mileteriga, oo uu keeno saraakiil cusub oo dardar ama istaraatijiyad cusub ku soo kordhiya gulufka hadda socda, walow guulo laga gaaray dhawaanahan safka hore.
Lahaanshaha sawirka microsoft
Milateriga Nigeria wuxuu danaynayaa inuu dib u soo ceshto muuqaalkii uu ku lahaa caalamka, ayadoo ururrada xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen inay geysteen xadgudubyo, dagaalka ka dhanka ah Boko Xaraam.
Waxay ballan qaadeen inay baaritaan ku samaynayaan eedeymahaas, laakiin natiijadii ka soo baxday lama shaacin, inkastoo askartu ay wajahayeen maxkamad milateri, ayadoo ciidanku isku dayayo inuu muujiyo in uu wax ka qabanayo anshax-xumada ciidanka ka dhex jirta.
Tani waxay noqonaysaa qaab ay ugu guulaystaan taageero milateri oo ay ka helaan galbeedka, gaar ahaan Maraykanka, taasoo ah tababarro sare iyo qalab.
Nigeria waxay sheegaysaa in qalab la'aanta ay hoos u dhigtay hawlgalladeeda ka dhanka ah kacdoonnada, ayadoo xukuumaddu ay waddooyin kale qaadayso, kuwaasoo ay ku jirto talaabada muranka dhalisay ee ah in la qorto shirkado amni oo gaar loo leeyahay.
Warbixinno la soo saaray bishii Maarso ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah qolyahaas loogu yeeray "tababarayaasha Milateriga" oo ka kala socda Koofur Afrika iyo dalalkii ka tirsanaan jiray Itixaadkii Sovieti ay hawlo ka wadeen safafka hore ee hawlgallada Milateriga ee ka dhanka ah Boko Xaraam.
Xukuumadda Nigeria ma aysan cayimin in qolyahaasi ay ku lug lahaayeen dagaal toos ah.
Guulaha dhawaanahan laga gaaray Boko Xaraam ayaa sii dhiirigalisay milateriga Nigeria iyo madaxweyne Goodluck Jonathan oo isu diyaarinaya inuu dhamaysto muddada xafiiska uga dhiman oo ku eg dhamaadka May.
Boko Xaraam waxay weli dhaqdhaqaaqyo ka waddaa Nigeria, iyo waddanka Cameroon oo xuduudda dhinaca kale ka saaran iyo meela kale oo dalka Niger ah.
Saamaynta iyo taageerada khilaafada Islaamiga ayaa kacdoonka ka dhigaya mid weli ka fog dhamaanshiyo, wuxuuna noqon karaa mid heerkiisa farsamo uu sare u sii kaco